आफ्नो गोप्य भिडियो लिंक भएपछि रुँदै लाइभमा आइन् अभिनेत्री -
आफ्नो गोप्य भिडियो लिंक भएपछि रुँदै लाइभमा आइन् अभिनेत्री
२०७८ साउन २९ गते प्रकाशितetoday
त्रिशाकर मधु भोजपुरी फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री हुन् । यतिबेला उनी सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छाएकी छन् । चर्चाको बिषय उनको एक एसएमएस बनेको छ ।
जसमा उनी केटाका साथमा देखिएकी छन् । एमएमएसमा भाइरल भइरहेको छ । भिडियो सार्वजनिक गर्ने ब्यक्ति प्रति उनी आक्रोशित बनेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘भगवानले सबै देख्छन् । मलाई गाली खुवाउन मेरो प्राइभेट भिडियो भाइरल गर्दिए । उनले भिडियो सार्वजनिक
गर्नेलाई प्रश्न गरेकी छन्, ‘यदि तपाइँको बहिनीसँग कसैले विवाह गरेर अर्काे दिन सुहागरातको भिडियो भाइरल गर्दियो भने राम्रो लाग्छ हो ? ।’ ‘बिहारमा नराम्रा केही ब्यक्ति पनि रहेछन् ।
मलाई थाहा थिएन’ उनले अगाडि भनेकी छन् । भिडियो लाइभमा उनले रुँदै भनेकी छन् ‘म के गरु केही सोच्न सकेको छैन ।’ मानिसहरु उनलाई अहिले प्रश्न गरिरहेका छन्, भिडियोमा को हुन् ? ।
भिडियोका कारण अभिनेत्रीको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना समेत भइरहेको छ । आलोचनाको कारण उनले आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट समेत प्राइभेट गरेकी छन् ।
अहिलेसम्म भिडियो सार्वजनिक गर्ने ब्यक्ति थाहा हुन सकेको छैन । मधुले कयौं भोजपुरी स्टार्ससँग काम गरिसकेकी छन् । उनको फिल्म अभिनय दर्शकले रुचाउने गरेका छन् ।
एमएमएस बाहिर आएपनि सोही दर्शकको आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । त्रिशाकर मधु भोजपुरी फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री हुन् । यतिबेला उनी सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छाएकी छन् । चर्चाको बिषय उनको एक एसएमएस बनेको छ ।
जसमा उनी केटाका साथमा देखिएकी छन् । एमएमएसमा भाइरल भइरहेको छ । भिडियो सार्वजनिक गर्ने ब्यक्ति प्रति उनी आक्रोशित बनेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘
भगवानले सबै देख्छन् । मलाई गाली खुवाउन मेरो प्राइभेट भिडियो भाइरल गर्दिए । उनले भिडियो सार्वजनिक गर्नेलाई प्रश्न गरेकी छन्, ‘यदि तपाइँको बहिनीसँग कसैले विवाह गरेर अर्काे दिन सुहागरातको भिडियो भाइरल गर्दियो भने राम्रो लाग्छ हो ? ।
’ ‘बिहारमा नराम्रा केही ब्यक्ति पनि रहेछन् । मलाई थाहा थिएन’ उनले अगाडि भनेकी छन् । भिडियो लाइभमा उनले रुँदै भनेकी छन् ‘म के गरु केही सोच्न सकेको छैन ।
’ मानिसहरु उनलाई अहिले प्रश्न गरिरहेका छन्, भिडियोमा को हुन् ? । भिडियोका कारण अभिनेत्रीको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना समेत भइरहेको छ । आलोचनाको कारण उनले
आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट समेत प्राइभेट गरेकी छन् । अहिलेसम्म भिडियो सार्वजनिक गर्ने ब्यक्ति थाहा हुन सकेको छैन । मधुले कयौं भोजपुरी स्टार्ससँग काम गरिसकेकी छन् । उनको फिल्म अभिनय दर्शकले रुचाउने गरेका छन् । एमएमएस बाहिर आएपनि सोही दर्शकको आलोचना खेप्नु परिरहेको छ ।
श्रीमानले स’न्तुष्टि दिन नसकेको भन्दै श्रीमती पुलिस चौकी पुगेपछि….
म २३ बर्षकी सिगंल हुँ,म एक्लै छु मलाई फोनमा बोल्ने, रमाइलो गर्ने केटा साथी चाहीयो। अहिल्यै पुरा पढ्नुहोस्